लिड्स युनाइटेडको इपिएल पुनरागमनको कथा - सबै खेल
लिड्स युनाइटेडको इपिएल पुनरागमनको कथा
८ श्रावण २०७७, बिहीबार २२:०४ July 23, 20200Comments Leads United
दुई दशक जति भइसकेको थियो, लिड्सको अभ्यास मैदान थोर्प आर्चमा राम्रोसँग सफाइ नभएको । जतिबेला मार्सेलो बिइल्सा व्यवस्थापक भएर पहिलोपल्ट त्यहाँ पुगे, आफ्ना खेलाडीलाई सफाइमा लगाए । त्यसो त अचेलका फुटबलका आधुनिक खेलाडीलाई कोही व्यवस्थापकले सुहाउँदैन थियो कि ?
अनि तिनै खेलाडीलाई बिइल्साको प्रश्न थियो, क्लबका समर्थकले टिमका खेल हेर्न के कति मात्र गर्नुपर्छ ? पूर्वखेलाडी केमर रुफ भन्छन्, सायद प्रशिक्षक खेलाडीलाई आफ्नो वास्तविक औकात सम्झाउन चाहन्थे ।
लिड्सको मैदान क्यारो रोडको डगआउट पनि उत्तिकै फोहार थियो, जताततै पानीका बोतल थिए । सुरुआती दिनमै लिड्स नर्विच सिटीको हातबाट नमज्जासँग २–० ले पराजित भयो । बिइल्सा आफैंमा खुबै निराश थिए । जम्माजम्मी ९० मिनेटको खेल पनि निकै उदेकलाग्दो भएको थियो, यदि लिड्सको समर्थक थियौं भने । अर्जेन्टिनाबाट इंग्ल्यान्ड आएको सात सातामात्रै के भएको थियो, बिइल्साले बुझिहाले, यो क्लबमा फेरिनुपर्ने त धेरै पो छ ।
उनी आउनुअगाडि क्लबमा कसैले पनि यो बुझ्न सकेका थिएनन् कि आखिरमा इंग्लिस फुटबलको माथिल्लो डिभिजन प्रिमियर लिगमा चढ्ने कसरी हो ? कोहीसँग पनि उत्तर थिएन, अवाक थिए । सन् २०१८ को जुनमा पाउल हेकिङबटम बर्खास्तीमा परे र क्लबमा मालिक एन्ड्रे रोड्रिजानीले आफ्ना निर्देशक भिक्टर ओर्टालाई सोधे, ‘अब मुख्य प्रशिक्षक कसलाई राख्नु पर्छ त ?’ ओर्टाको जवाफ थियो, ‘बिइल्सा । तर मलाई के लाग्छ भने यो सम्भव छैन ।’
क्लब अध्यक्ष पनि रहेका रोड्रिजानीले फेरि सोधे, तर एकपल्ट प्रयास गर्दैनौं ? नभन्दै लिड्सले प्रयास गर्‍यो र बिइल्साले माने पनि । आखिरमा उनी कम्तीका प्रशिक्षक थिएनन्, अर्जेन्टिनादेखि चिली, मार्सेदेखि बिल्बाओ, जताततै उनलाई सम्मान गरिन्छ । अझ उनी पेप ग्वार्डिओला र माउरिसियो पोचेटिनोका ‘गडफाडर’ हुन् । लिड्स समर्थक उनी के आए, तिनका जबरदस्त समर्थक भइहाले । उनको व्यक्तित्व नै त्यस्तो छ, सबैले मन पराउने ।
उनको खेलाउने शैली पनि त त्यस्तै छ, आक्रामक तर भद्र । कडा स्वभाव तर सुखद । जस्तै स्थिति र प्रतिद्वन्द्वी भए पनि त्यस्तै फुटबल खेलाउँछन् । बिइल्सा आएपछि क्लबका खेलाडीले फल्ने फुल्ने अवसर पनि पाए । जस्तो कि केल्भिजन फिलिप्स । बिइल्सा आएपछि त उनी मिडफिल्डमा खुबै चम्के र उनलाई भन्न पनि सुरु भयो । यी त योर्कसायरका पिर्लो पो हुन् । अनि पोल्यान्डका माटेसुज क्लिचले पनि लिड्सका लागि आफ्नो प्रतिभा देखाउन अवसर पाए ।
लगभग ६ वर्षअगाडि लिड्समा आएका डिफेन्डर लियाम कुपरलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिइयो । उनैले अन्ततः टिमलाई प्रिमियर लिग पुर्‍याएका छन् । केही समय अगाडिसम्म पनि लियामलाई लिग वान स्तरका खेलाडी भनिन्थ्यो । तर उनले नै बिइल्साको विश्वास सबैभन्दा बढी जिते । टिमको सेन्टर ब्याकमा उनले ब्राइटनबाट आएका बेन ह्वाइटसँग खुबै जोडी बनाए । यिनै कुपर र ह्वाइटले लिड्सको फोहर अभ्यास मैदानको पनि खुबै सफाइ गरे ।
लिड्स युनाइटेडका प्रशिक्षक मार्सेलो बिइल्सा
बिइल्सालाई राम्रोसँग थाहा थियो, लिड्सको इतिहास कति समृद्ध छ भनेर । तर उनलाई यसमा ठूलै रुचि भने थिएन । आखिरमा इतिहासले वर्तमानमा केही गर्ने त होइन, कम्तीमा फुटबलको मैदानमा । बिइल्साले सबैभन्दा पहिले खेलाडीको मानसिकता परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे । गत सिजन उनको खुबै आलोचना भयो । त्यसको पहिलो कारण त उनले एस्टन भिल्लालाई गोल उपहार दिने निर्णय गरेका थिए अनि त्यही क्लबमा जासुसी गर्न आफ्ना मान्छेलाई पनि पठाए ।
एक प्रकारले उनी इंग्ल्यान्डमा एक्लै जस्तै थिए । दक्षिण अमेरिकी पाराको फुटबल सोच युरोपमा काम नलाग्न पनि सक्थ्यो । आलोचकले लिड्स अब सकियो पनि भन्न थालेका थिए । यसले क्लब समर्थकलाई चिन्तामा पार्ने निश्चित थियो । तर बिइल्सालाई पनि के राम्रोसँग थाहा थियो भने यस्तो स्थितिले समर्थकलाई साँच्चै पीडा दिने गर्छ । यत्तिकैमा एक सिजन गयो, दोस्रो सिजनदेखि भने लिड्समा बिइल्सा हुनुको अर्थ निस्कन थाल्यो ।
भर्खरै जस्तो हो, लिड्स प्रिमियर लिगमा मात्र उक्लेको छैन । लिड्सले त पूरा लिग नै जितेको छ । त्यसो भनेको, लिड्स दोस्रो डिभिजनको च्याम्पियनसिप लिग विजेता बनेको छ । अब त लिड्स कसरी माथि उक्लन सफल रह्यो । यो कथा पुरानो भइसक्यो, भलै यसले अर्थ भने राख्छ । अबको कथा हो, अबको सिजन लिड्सले प्रिमियर लिगमा कस्तो गर्नेछ त ? के लिड्स प्रिमियर लिगमा खेल्न सक्षम छ त ? यसको उत्तर पनि त बिइल्साले नै दिनेछन् ।
← वेस्टह्यामसँग रोकियो युनाइटेड, च्याम्पिन्यस लिग नजिक
राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण भदौ १ बाट →
रेगुइलिन टोटनह्याममा अनुबन्ध नजिक
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार ००:३७ 0
इएल क्लासिकोमा बार्सिलोनाको रवाफ
१२ कार्तिक २०७५, सोमबार १९:५७ 0
सिमरा गोल्डकप : उद्घाटन खेलमा आयोजक विजयी
४ माघ २०७५, शुक्रबार २१:४३ 0